မြစ်ချောင်း အင်းအိုင်များ ပျက်စီးမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှုကြောင့် ချင်းတွင်းမြစ် - Yangon Media Group
မြစ်ချောင်း အင်းအိုင်များ ပျက်စီးမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှုကြောင့် ချင်းတွင်းမြစ်
ကလေး၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၇
ချင်းတွင်း အထက်ပိုင်း ဟုမ္မလင်းနှင့် ဖောင်း ပြင်ဒေသရှိ မြစ်ချောင်းအင်းအိုင် များအတွင်း စည်းကမ်းမဲ့ငါးဖမ်းမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှု များလာသောကြောင့် ငါးများရှားပါးလာပြီး ငါးကျပ်တင်ခြောက်လုပ်ကိုင်သူများမှာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် နည်းပါးလာနေကြောင်းသိရသည်။ မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်များ အတွင်း စည်းကမ်းမဲ့ငါးဖမ်းဆီးမှု ကြောင့်လည်းကောင်း၊ အချို့ချောင်း ငယ်မြောင်းငယ်များနှင့် သဘာဝအင်းအိုင်တို့မှာ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ပျက်စီးယိုယွင်းလာသည့် အတွက်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ အချို့မှာ ရွှေမျောများကြောင့်လည်း ကောင်း ဒေသတွင်းတံငါလုပ်ငန်းများ ထိခိုက်လျော့နည်းလာကာ ငါးကျပ်တင်ခြောက်တင်ပို့ရောင်းချမှုများပါ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် နည်းပါးလာခြင်းဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များမှအစပြု၍ ချင်းတွင်းအထက်ပိုင်းမြို့ကြီးများဖြစ်သည့် ကလေး၊ ကလေးဝ၊ မော်လိုက်၊ ဖောင်းပြင်၊ ဟုမ္မလင်းနှင့် ခန္တီးမြို့များမှထွက်ရှိသည့် မြစ်ငါးနှင့် အင်းငါးများရောင်းဝယ်စားသုံးမှုထက် မုံရွာနှင့် ကလေး ဒေသဘက်မှတင်ပို့သော မွေးငါး၊ ရေခဲရိုက်ငါး၊ ပုစွန်များဝင်ရောက်လာမှု တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်များ ပြားလာသည်။
”ကျွန်မတို့ ဟုမ္မလင်း၊ ဖောင်း ပြင်ဒေသမှာ သဘာဝရေပျော်ငါးထွက်ရှိမှုနည်းလာတဲ့အတွက် နှစ်စဉ်တမူးနယ်စပ်ကို တင်ပို့ရောင်းချတဲ့ ငါးကျပ်တင်ခြောက်တင်ပို့ ရောင်းချမှုလည်းနည်းလာသလို ငါးကျပ်တင်ခြောက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေလည်းနည်းလာတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကျော်ကာလ တွေတုန်းက ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ တံငါသည်တွေလည်း မြစ်ကြောင်း တစ်လျှောက်နေရာတိုင်းမှာတွေ့ မြင်နိုင်ပြီး ငါးအရောင်းအဝယ် လုပ်ကိုင်သူလည်းရာနဲ့ချီရှိတယ်။ အခုတော့ လေးငါးဆယ်ယောက် ဝန်းကျင်ပဲရှိတော့တယ်”ဟု ဟုမ္မ လင်းမြို့မဈေးမှ ဒေါ်ကြည်သိန်းက ပြောကြားသည်။
ခရစ္စမတ်ရာသီ မြန်မာ- အိန္ဒိယနယ်စပ် နန်းဖာလုံဈေးတွင် ငါးကျပ်တင်ခြောက်အရောင်း အဝယ်သွက်လျက်ရှိပြီး မွေးမြူရေး ငါးကျပ်တင်ခြောက်တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၁၂ဝဝဝ ဖြင့်လည်း ကောင်း၊ ချင်းတွင်းမြစ်ဖျားဒေသထွက် ဟုမ္မလင်းငါးကျပ်တင်ခြောက် တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၁၈ဝဝဝ ဖြင့်လည်းကောင်း အရောင်းအဝယ် ဖြစ်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ပြင်သစ် အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို ချဲလ်ဆီး ကွင်းလယ်လူ ကန်တီ ဆွတ်ခူး
ဖမ်းဆီးခံ သတင်းသမားများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ပြည်မြို့တွင် စုပေါင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သီးနှံအာမခံ စမ်းသပ် လုပ်ကိုင်မည်
သင်္ကြန်မတိုင်မီရက် များအတွင်း အဝေးပြေးယာဉ် လိုင်းများ လက်မှတ်ခများ ကိုသတ်မှတ်နှုန်း ထက် ပို??
လက်ရှိတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် အပတ်တကုတ် အားထုတ်နေဆဲ ကာလဖြစ်သည့်အတွက် တိုင်းရင်းသား လူ??
ပြည်ခိုင်ဖြိုးနှင့် တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်တို့ အဓိကပါဝင်သောအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကု??